Investment Archives - Business Centric Network (BCN)
September 13, 2018 September 11, 2018 San Thida
ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပါ ရေလိုအပ်ရင် ရေပုံးထမ်းပြီး ရေသယ်လို့လည်း ရသလို ရေပိုက်သွယ်တဲ့နည်းနဲ့ ရေတွေဝင်လာအောင် လုပ်လို့လည်းရပါတယ်။ ရေပုံးထမ်းပြီး ရေသယ်တာဟာ ရေရှိရာနောက်ကို လိုက်ရှာကာခပ်ယူတာဖြစ်ပြီး ရေပိုက်သွယ်တာကတော့ ရေရှိရာအရပ်က ရေတွေ ကိုယ့်ဆီစီးဝင်လာအောင် လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ ငွေတွေ ကိုယ့်နောက်လိုက်လာစေဖို့ဆိုရင် ငွေတွေရှိတဲ့နေရာက ငွေတွေကို ပိုက်သွယ်ပြီး ငွေဘုံဘိုင်အဖြစ် ကိုယ့်ဆီ စီးဝင်လာအောင် ငွေဝင်လမ်းကြောင်းတွေကို ဖန်တီးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ငွေဘုံဘိုင် အဖြစ် ဖန်တီးတည်ဆောက်ပြီး ငွေတွေစီးဝင်လာအောင် လုပ်တယ်ဆိုတာ တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု အဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေကို တည်ဆောက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဌေးဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာ အလုပ်ကို အချိန်ပြည့် နဖူးကချေး ခြေမကျအောင် ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်စရာ မလိုပဲ ငွေတွေ တလှိမ့်လှိမ့် ၀င်လာစေတာကတော့ သူတို့ရဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့… Continue reading ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပါ
Business, Entrepreneurship, Investment, Success
Are you ready to start your own business? သင် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးစဖို့ ရုန်းထွက်နိုင်ပြီလား?
September 12, 2018 September 11, 2018 San Thida
သင် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးစဖို့ ရုန်းထွက်နိုင်ပြီလား? ကျွမ်းကျင် လုပ်သားများ ရှားပါးလာခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းတစ်ရပ်မှာ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းများ တည်ထောင်လာကြလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွင့်လင်းလာတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ လုပ်သားကောင်းများ ထိန်းသိမ်း ဖို့ အတော့ကိုပဲ ခက်ခဲလာတာပါ။ အလုပ်သမားကောင်းတွေဟာ လစာများတဲ့ နေရာများသို့ ခုန်ကူးကြခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းသေးများ တည်ထောင်ခြင်း စသည်ဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များသို့ ခုန်ကူးနေကြပါတယ်။ ဒီတော့ ဘယ်အချိန် ခုန်ကူးမလဲ။ Back up ငွေရှိပါစေ မိမိရဲ့ ရှိသမျှငွေများ ပုံအောပြီး ပြောင်းခြင်းသည် မိမိ အရမ်းပိုင်နိုင်တဲ တချို့ ကိစ္စများတွင်ကောင်းပါတယ်။ ဥပမာ - ဘုရင့်နောင် ဖောင်ဖျက်ခြင်း၊ သို့သော် မအောင်မြင်ရင် မိမိ မိသားစုအားလုံး ဒုက္ခရောက်စေမယ့် လမ်းမျိုး… Continue reading Are you ready to start your own business? သင် ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးစဖို့ ရုန်းထွက်နိုင်ပြီလား?
တွေးမိတွေးရာလို့ပဲ ပြောရမလား အခုရက်မှာ အလုပ်ခေါ်စာတွေတင်ပေးတဲ့ အခါမှာ တွေ့ရတာလေးတွေကို လူငယ်တွေ အတွက်သတိထားစေချင်တာလေးတွေကို မျှဝေချင်လို့ပါ။ ပထမဆုံးကတော့ CV တွေက ပြီးစလွယ် ဆိုင်ကဝယ်ပြီးရင် လက်ရေးနဲ့ ဖြည့် ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်ကြတာတွေတွေ့ရတယ်။ CV အတွက် Microsoft Word မှာ Template (ပုံစံ)တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ Microsoft Word မှာပြည့်ပြည့်စုံစုံ၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးရေးပြီး CV ကို PDF ပြောင်းထားလိုက်ပါ။ တစ်ချို့ကလဲ ဘွဲ့လက်မှတ်တွေ၊ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်လေးတွေပါ ထည့်ချင်ရင်လဲ ထည့်ပြီး PDF လေးပြောင်းထားလိုက်ပါ။ ဒုတိယအနေနဲ့တော့ အလုပ်လိုအပ်ချက်တွေကို သေချာဖတ်ပါ။ မကိုက်ညီတာတွေ လျှောက်မိရင် အချိန်ကုန်၊လူပန်းနဲ့ နောက်ဆုံးစိတ်ဓါတ်ကျတဲ့ အထိဖြစ်ကြတယ်။ တတိယအရေးကြီးတာကတော့ မျှော်မှန်းလစာပါ။ မျှော်မှန်းလစာ ထည့်ပါဆိုရင် အလုပ်နဲ့သင့်တင့်တဲ့ လစာကို ထည့်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။… Continue reading ဖောင်စီးရင်းရေငတ် ဖောငျစီးရငျးရငေတျ
December 14, 2017 December 14, 2017 Wai Minn
ရငျးနှီးမွှပျနှံလိုသူမြားအတှကျသတငျးကောငျး TMH Telecom Public Company Limited ကနေ အစုရှယျယာတှကေို ဒီဇငျဘာ ၁၅ ရကျနကေ့နေ ၂၂ ရကျနအေ့ထိရောငျးခပြေးမှာဖွဈပါတယျ။ ဝယျယူလိုသူမြားအနနေဲ့ Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd ကတဈဆငျ့ဝယျယူနိုငျပါပွီ။ အစုရှယျယာ တဈစုကို ၃၀၀၀ မှ ၃၃၀၀ အတှငျး မိမိ ဝယျယူလိုသော ဈေးနှုနျးဖွငျ့ အဝယျအျောဒါတငျနိုငျပွီဖွဈပါတယျ။ ရှယျယာ ဝယျယူရရှိသော သူစာရငျးကို ဒီဇငျဘာ ၂၆ ရကျမှာသိရမှာဖွဈပါတယျ။ TMH Telecom Public Company Limited အကွောငျးလလေ့ာခငျြသူမြားအတှကျ http://www.tmhtelecom.com/ Yangon Stock Exchange မှာ ဒီဇငျဘာ (၄) ရကျနကေ့ listed ဖွဈပွီးပါပွီ။ https://ysx-mm.com/notices/
Tagged TMH, YSXLeaveacomment